श्रीदेवीको पुण्यतिथिमा भावुक हुदैँ जान्वीले लेखिन्, 'आमा ! म तिमीलाई हरेक दिन याद गर्छु' - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
श्रीदेवीको पुण्यतिथिमा भावुक हुदैँ जान्वीले लेखिन्, ‘आमा ! म तिमीलाई हरेक दिन याद गर्छु’
24 February, 2020 1:20 pm
१२ फागुन २०७६, काठमाडौँ
जान्वी कपुर बलिउडकी चर्चित नायिका हुन् । उनी बलिउडमा आएको त्यति समय भएको छैन । तर उनले लोभलाग्दो सफलता हासिल गरेकी छिन् । उनलाई ठूला व्यानरका चलचित्रबाट अफर आइरहेका छन् ।
सबैलाई यथावत नै होला जान्वी बलिउडकी नक्षेत्रको रुपमा परिचित स्वर्गीय अभिनेत्री श्रीदेवीकी छोरी हुन् । श्रीदेवीको आजभन्दा २ बर्ष अगाडी निधन भएको थियो । उनी एक साथीको विवाहमा जादाँ बाथपटमा उनको शव भेटिएको थियो ।
यस्तै श्रीदेवीको पुण्यतिथिमा उनलाई सम्झदैँ जान्वीले सामाजिक सञ्जालमा भावुक स्टाटस लेखेकी छिन् । जान्वीले श्रीदेवीसँगको आफ्नो बच्चाबेलाको तस्बिर सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, आमा म तिमीलाई हरेक दिन याद गर्छु ।
उनको तस्बिरमा धेरैले श्रीदेवीलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् भने कतिले दुख पनि व्यक्त गरेका छन् । श्रीदेवीले बलिउडमा धेरै योगदान दिएकी छिन् । जसका कारण आजपनि उनी सबैको लागि त्यति नै प्रिय छिन् जति उनी पहिले थिइन् । उनी गएपनि उनको नाम बलिउडमा कहिल्यै मेटिने छैन ।
एयरपोर्टमा कपिलले रिसाउँदै गरे फोटोग्राफरलाई गाली, यस्तो छ कारण…
विवाहबारे प्रश्न गर्दा पलले भने- ‘घर बनाएपछि मात्र बिहे गर्छु’
विपिन र नम्रता पछि ‘प्रसाद २’ मा भित्रिए निश्चल